Iyini ingqondo ephelele yokukwakha umkhankaso wokumaketha we-intanethi?
Njalo uma ungathanda ukuthuthukisa ibhizinisi lakho kuwebhu udinga ukuqhuba umkhankaso wokukhangisa we-inthanethi wokuwina. Akunangqondo ukuthi ungathanda ukuthuthukisa iphrojekthi esanda kumiswa noma ukuthuthukisa ukubonakala kwe-inthanethi kokuhlala isikhathi eside, kuzo zombili izimo udinga ukuqala ngomkhankaso wakho wokumaketha nge-intanethi. Yindlela ephelele yokuheha amakhasimende amasha futhi uthole ukugeleza kwe-traffic njalo esizindeni sakho.
Ukumaketha okungenayo kuyindlela ephumelelayo yokukhushulwa ekhuluma ngokudala okuqukethwe kwewebhsayithi yekhwalithi okuzobangela ukunakwa kwabasebenzisi futhi ibangenise ngolwazi olungasiza ekuxazululeni izinkinga zabo. Isebenza kangcono kunokubiza okubandayo kanye nezinye izinhlobo zokukhuthazwa okungaxhunyiwe ku-intanethi nokuxhumana nezilaleli ezihlosiwe. Ukuze uphumelele ezweni le-intanethi uphinde wenze ibhizinisi lakho liphumelele, udinga ukusebenzisa zonke iziteshi zakho zedijithali njengewebsite, ibhulogi, ama-akhawunti wezokuxhumana noma uhlu lwe-imeyili. Zonke lezi ziteshi zizokusiza ukukhomba amakhasimende akho angakwazi ukuzenza futhi uziguqule zibe njalo.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngamanye amathiphu abalulekile ukuthi sithuthukise kanjani isu elikhangayo lokukhangisa ukuze wenze ibhizinisi lakho le-intanethi liphumelele futhi liphindise kabili imali yakho.
Izikhombisi-ndlela zokwakha umkhankaso wokuthengisa we-inthanethi ophumelelayo
Udinga ukuqala ukuthuthukisa umkhankaso wokumaketha wakho we-intanethi ngokubeka imigomo ehlakaniphile. Kunezinhloso ezinhlanu eziyinhloko zebhizinisi ngalinye - elithile, elilinganiselwe, elifinyelelekayo, elingokoqobo kanye nesikhathi.
Kubalulekile ukwazi izinhloso ezifinyelelekayo nezifinyelelekayo kubhizinisi lakho le-intanethi ngaphambi kokuqala ukwakha uhlelo lokumaketha. Uma unemibono engaqondakaliyo noma engaqondakali, ngeke neze igcwaliseke futhi uzodumazeka futhi ngeke ukwazi ukugxila ekuzuzeni okutholile kakade.
Yingakho imigomo yakho kufanele ithembele kudatha yokuhlaziywa kwewebhusayithi yamanje. Amamethrikhi wakho wewebhusayithi azokusiza ukuba ubone ukuthi yiziphi izici ezisebenzayo zomgomo wakho wokugcina.
Njengomthetho, akuwona wonke amaklayenti adalwe alinganayo. Udinga ukugxila kulabo abazothola ukubaluleka emikhiqizweni noma amasevisi wakho futhi kungenzeka ukuthi babe ngabahola bakho. Ungayichitha isikhathi sakho kumakhasimende owodwa oza kumthombo wakho wewebhu ngezikhathi ezithile. Ukwakha umkhankaso wokukhangisa we-intanethi wokuwina, udinga ukukhomba uhlobo oluthile lwamakhasimende. Ukuze uqonde ukuthi amakhasimende akho angakhona, udinga ukucacisa idatha mayelana nabo. Isibonelo, isizinda sabo, inani labantu kanye nezinye izihlonzi eziqondile. Beka yonke lemininingwane ukuze ubone isithombe esiphezulu sesilaleli zakho ezihlosiwe. Ngokwenza lokhu, uzoqonda izinkinga nezidingo zabo.
Nika amakhasimende akho angakwazi ukuwadingela
futhi yiziphi izinkinga abanakho, manje sekuyisikhathi sokubanika isipho esihlosiwe sokuzidweba. Udinga ukwakha okufanelekayo ngezinhloso zakho zamakhasimende ezinokwenzeka ukuze uxazululwe izinkinga zabo futhi uziqiniseke kumkhiqizo wakho. Ngokusungula okuqukethwe kwekhwalithi, uqondisa izivakashi zakho kuwebhusayithi kwisigaba esilandelayo sokuthengisa umfutho. Unganikeza ividiyo indlela-kuya noma isinyathelo esinezinyathelo umhlahlandlela ukuze uqhubeke nabo ohambweni lomthengi wabo Source .